Qadaafi oo baxsadey, wiilashiisii oo la qabtey & Triboli oo u gacan gashay….+Sawiro – SBC
Qadaafi oo baxsadey, wiilashiisii oo la qabtey & Triboli oo u gacan gashay….+Sawiro
Posted by editor on August 22, 2011 Comments
Hogaamiyihii awooda badnaa ee dalka Liibiya Col. Mucamar Al-Qadaafi ayaa ka baxsadey magaalada Tripoli ee caasimada wadankiisa oo uu mudo ka dagaalamayey waxaana baxsashadu ay ka dambeysay ka dib markii xoogaga mucaaradka ay gudaha u soo galeen xarumihii dawlada.
Warar ayaa sheegaya in Col. Qadaafi uu u baxsadey dhanka wadanka Al-Jeeriya waxaase jira warar kale oo sheegaya in ururka midowga Afrika uu siiyey magangalyo siyaasadeed waxaana soo baxaya in uu aaday wadamada Angola & Zimbabwe.
Wiilashii Qadaafi oo qaarkood la qabtey
Xoogaga mucaaradka ayaa sheegtey inay gacanta ku hayaan sadex wiil oo uu dhalay Col. Qadaafi kuwaasi oo uu ka mid yahay Saif al-Islam kaasi oo saacado ka hor ku baaqay dagaal ka dhan ah mucaaradka waxaana uu sheegay in ay sii wadayaan dagaalka ilaa iyo dhimashada.
Madaxa maxkamada caalamiga ah ee dambiyada dagaaka Luis Moreno-Ocampo ayaa sheegay in lagu soo wargaliyey in la qabtey Saif al-Islam, waxaana uu sheegay In lagu soo oogi doono dambiyo ku saleysan xasuuq shacab sida uu sheegay.
Wiilka curadka ah ee uu dhalay Col. Qadaafi oo lagu magacaabo Muhammad, ayaa isagoo wareysi siinayey Tv-ga Al-Jazeera waxaa gurigii uu ku jiray soo hareeray xoogaga mucaaradka, waxaana wareysiga oo toos (Live) ahaa uu sheegay in gurigiisa hortiisa xabad ka socoto, isla markaana lagu hareeraysan waxaana isagoo ashaahadanaya laga maqlayey xabado ka dhacay guriga iyadoo khadkii telefoonka uu go’ay.
Waxaa jira warar aan la hubin oo sheegaya in Col Gaddafi oo kumanaan kun oo ciidamo ah uu ku haysto gudaha magaalada isla markaana uu dagaalamyo, balse warar kale ayaa sheegaya in ciidamadaasi kuwa badan oo ka mid ah inay isku soo dhiibeen xoogaga falaagada.
Mustafa Mohammed Abdul Jalil oo ah madaxa golaha qaranka KMG Liibiya ayaa sheegay in digniin ku bixinayo in boqolaal ciidamo daacad ah ay wali ka dagaalamayaan magaalada.
Wasiirka warfaafinta Liibiya Minister Moussa Ibrahim in dagaalka Axadii ka bilowdey magaalada caasimada ah ay ku dhinteen 1300 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 500 boqol, isagoo sheegay inaanay Isbitaaladu tira koobi karin khasaaraha.
Madaxda reer Galbeedka oo hadley
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa yiri “Caawa waxaa awooda ka soo horjeeda Gaddafi ay gaartey halkii ugu sareysay, Tripoli waxay ka baxaysaa gacanta kaligii taliyaha”.
Ra’isalwasaaraha UK David Cameron ayaa isaguna yiri “Taasi waa dhamaadkii Gadaafi oo la gaaray”.
Dibadbaxyo & mashxarado ka aloosan caasimada
Kumanaan kun oo qof oo ka mid ah xoogaag mucaaradka ayaa isagu soo baxay magaalada Tripoli waxaana ay ku jiraan damaashad ku aadan soo galitaanka caasimada xoogaga mucaaradka.
Kumanaan kun oo qof ayaa wali taagan fagaaraha loo yaqaan Green Square iyadoo mucaaradku ay durba ka badaleen magaca fagaarahaasi iyagoo u bixiyey fagaaraha Shihiidiinta.